မက်ဆီ နဲ့ ကျွန်တော့်ကြားက ကွာခြားချက်က ဘာလဲသိလား? ကျွန်တော်က ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို သူ့ထက် အသင်းတွေအများကြီးနဲ့ ရခဲ့တာဗျ – Myan Ball
အာဂျင်တီးနား ကြယ်ပွင့်ဟာ ကစားသမားဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲ ကုန်ဆုံးနေစဉ်တွင် ဂျူဗင်တပ်ကစားသမားက ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေ နဲ့ ကစားနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုက သူ့ရဲ့ ကာလရှည် ပြိုင်ဘက်ကစားသမား မက်ဆီ နဲ့ သူ့ရဲ့အကြားတွင် ကွားခြားချက်မှာ အသင်းတစ်သင်းထဲ တွင် ကစားပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ၅ လုံးယူတာထက် သူက အသင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၅ လုံး ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်လုံး ငြင်းခုံခဲ့ကြတဲ့ ဘယ်သူပိုကောင်းလဲ ငြင်းခုံမှုတွေပြီးသွားပါပြီ။ စပိန်မှာရှိနေစဉ်ကတည်းက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နြ့ ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်တွေ ပြောနေကြတဲ့ ဘယ်ကစားသမားက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့ စကားက ပိုပြီး ပွက်လောရိုက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး ဘောလွန်းဒီအောဆုကို ၅ ကြိမ်စီ ရရှိထားကြပေမယ့် မက်ဆီမှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဘာစီလိုနာအသင်းတစ်သင်းတည်းထံမှာပင် ကစားနေလို့ ရော်နယ်ဒိုက အာဂျင်တီးနား ကစားသမားကို ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ ကစားရန် အရိပ်အမွက် ဆွဲဆောင်ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
DAZN စီးရီးရုပ်သံတစ်ခုအင်တာဗျူးမှာ ရော်နယ်ဒိုက “မက်ဆီနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ သူဟာ အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဘောလွန်းဒီအော ဆုတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိတိုင်အောင် ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ကျွန်တော့်လိုမျိုး ရပ်တည်နေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီ နဲ့ ကျွန်တော့်ကြားက ကွာခြားချက်ကတော့ ကျွန်တော်က မတူညီတဲ့ အသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ကို လည်း မတူညီတဲ့အသင်းတွေနဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၆ ကြိ်မ်ဆက်တိုက်လည်း ဂိုးသွင်းအများဆုံးသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ပေါ်တူဂီအသင်းခေါင်းဆောင်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ် တစ်ကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ ၄ ကြိမ် အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်က ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းမှာ ကွာတားကနေ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီး ယခုနှစ်တွင် ဂျူဗင်တပ် အသင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရရှိရန်အတွက် နည်းပြအပြောင်းအလဲများ၊ အင်အားဖြည့်တင်းမှုများ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မကျဆီ နဲ့ ကြှနျတေျာ့ကွားက ကှာခွားခကျြက ဘာလဲသိလား? ကြှနျတျောက ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို သူ့ထကျ အသငျးတှအေမြားကွီးနဲ့ ရခဲ့တာဗြ
အာဂငျြတီးနား ကွယျပှငျ့ဟာ ကစားသမားဘ၀ တဈလြှောကျလုံး ဘာစီလိုနာအသငျးမှာပဲ ကုနျဆုံးနစေဉျတှငျ ဂြူဗငျတပျကစားသမားက ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှေ နဲ့ ကစားနခေဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုက သူ့ရဲ့ ကာလရှညျ ပွိုငျဘကျကစားသမား မကျဆီ နဲ့ သူ့ရဲ့အကွားတှငျ ကှားခွားခကျြမှာ အသငျးတဈသငျးထဲ တှငျ ကစားပွီး ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ၅ လုံးယူတာထကျ သူက အသငျးတှေ အမြားကွီးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ၅ လုံး ယူခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
တဈခြိနျလုံး ငွငျးခုံခဲ့ကွတဲ့ ဘယျသူပိုကောငျးလဲ ငွငျးခုံမှုတှပွေီးသှားပါပွီ။ စပိနျမှာရှိနစေဉျကတညျးက ရီးရဲလျမကျဒရဈ နွ့ ဘာစီလိုနာ ပရိသတျတှေ ပွောနကွေတဲ့ ဘယျကစားသမားက အကောငျးဆုံးလဲဆိုတဲ့ စကားက ပိုပွီး ပှကျလောရိုကျလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
နှဈယောကျစလုံး ဘောလှနျးဒီအောဆုကို ၅ ကွိမျစီ ရရှိထားကွပမေယျ့ မကျဆီမှာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျလုံးတှငျ ဘာစီလိုနာအသငျးတဈသငျးတညျးထံမှာပငျ ကစားနလေို့ ရျောနယျဒိုက အာဂငျြတီးနား ကစားသမားကို ပတျဝနျးကငျြအသဈမှာ ကစားရနျ အရိပျအမှကျ ဆှဲဆောငျပွောကွားလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
DAZN စီးရီးရုပျသံတဈခုအငျတာဗြူးမှာ ရျောနယျဒိုက “မကျဆီနဲ့ ပတျသတျတဲ့ အကွောငျးကတော့ သူဟာ အကောငျးဆုံးကစားသမားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဘောလှနျးဒီအော ဆုတှကွေောငျ့မဟုတျပဲ နှဈပေါငျးမြားစှာ ထိတိုငျအောငျ ထိပျတနျးအဆငျ့မှာ ကြှနျတေျာ့လိုမြိုး ရပျတညျနနေိုငျလို့ဖွဈပါတယျ။ မကျဆီ နဲ့ ကြှနျတေျာ့ကွားက ကှာခွားခကျြကတော့ ကြှနျတျောက မတူညီတဲ့ အသငျးတှမှော ကစားခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျဖလား ကို လညျး မတူညီတဲ့အသငျးတှနေဲ့ ရခဲ့ပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ၆ ကွိမျဆကျတိုကျလညျး ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးသူဖွဈခဲ့ပါတယျ” လို့ ပျေါတူဂီအသငျးခေါငျးဆောငျက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ကို မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှဈ တဈကွိမျ ရရှိခဲ့ပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးနဲ့ ၄ ကွိမျ အထိ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျက ရျောနယျဒိုရဲ့ ဂြူဗငျတပျအသငျးမှာ ကှာတားကနေ လှညျ့ပွနျခဲ့ရပွီး ယခုနှဈတှငျ ဂြူဗငျတပျ အသငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရရှိရနျအတှကျ နညျးပွအပွောငျးအလဲမြား၊ အငျအားဖွညျ့တငျးမှုမြား ကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။